Markab xamuul oo la afduubtay
Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ayaa sheegay in 4 burcad-badeed Soomali ah ay qabsadeen markab xamuul oo laga leeyahay dalka Liberia iyo 21 shaqaale ah oo u dhashay dalka Filipino oo ay maxbuus ahaan u qabsadeen.
War qoraal ah oo Midowga Yurub ay soo saareen ayay ku sheegeen in markabkan oo lagu magacaabo VOC DAISY, uu xiriir la sameeyay ciidamada Amniga markii la weerarayay, wuxuuna markabkaasi uu soo wariyay in afar burcad-badeed ah oo ku hubaysan qoryaha AK-47 ay markabka xoog ku galeen.
Midowga Yurub, waxay sheegeen in markabkan laga qabsaday meel 300 KM koonfur bari kaga toosan dalka Cuman, halkaasoo ka baxsan goobaha ay ilaaliyaan ciidamada caalamiga ah ee ka dhanka ah burcad-badeedda.
Gaaf-wareega ama roondada Maraakiibta dagaalka ee Midowga Yurub iyo Mareykanka ee xeebaha Somalia ayaa ku dhaliyay burcad-badeedda inay masaafooyin fog-fog u safraan si ay weeraro u geystaan.
Urur caalami ah oo kor kala socda howlaha maraakiibta, ayaa maanta sheegay in roondeynta xeebaha Somalia ay sidoo kale ku guulaysatay dib u dhac ku yimid tirada guud ee weerarada burcad-badeedda.
Xafiiska caalamiga ah ee howlaha maraakiibta ayaa warbixin uu afartii biloodba mar soo saaro ku sheegay in sadexdii bilood ee ugu horeeyay sanadkan 2010 ay burcad-badeeddu 17 weerar ka geysteen gacanka Cadmeed, marka la bar-bar dhigo 41 weerar oo ay sanadkii hore geysteen.
Agaasimaha Xafiiska caalamiga ah ee howlaha Maraakiibta, Pottengal Mukundan ayaa sheegay in “talaabada xooga badan” ee ay qaadeen ciidamada badda ee caalamiga ah ee ka dhanka ah burcad-badeeddu ay ahayd mid muhiim u ah xakameynta weerarada burcad-badeedda.